Barashada Luuqada Iswiidhishka – Warbixin xaga luuqada iyo nolosha | Somaliska
Xaqiiqada ah in dadka Iswiidhishka ay ku hadlaan ingiriis aad u fiican waa barako waana dhibaato. Way fiicantahay haddii aad ku cusub tahay Stockholm ee aad joojin kartid qofkasta ee u dhexeeya 9 ilaa 99 sano si aad u waydiisid wadooyinka adigoo isticmaalaaya Ingiriis. Balse way adagtahay barashada Iswiidhishka haddii aad horey u taqaaney Ingiriis waayo markasta maskaxdaadu waxay soo qabsaneysaa Ingiriiska. Gabadha lagu magacaabo Charlotte West ee u dhalatay maraykanka ayaa waxay ka warameysaa sideey ku baratay luuqada Iswiidhishka. Waxaan imid Sweden bishii ogoosto 2002, anigoo wata qaamuus isku turjumaya iswiidhish iyo ingiriis, oo soo qaatay koorso 8 isbuuc ah. Afar sano ka dib, waxaan noqday mid si sareysa ugu hali karta luuqada Iswiidhish. Barashadeydii luqada Iswiidhishka mid fudud ma aheyn. Maalin maalmaha ka mid ah ayaan ka codsaday gabadh timaha ii sameyneysay in ay tinka ii saarto "flingor" oo ah siiriyaalka lagu darsado khuraacda anigoo rabay in aan codsado "slingor" oo ah in timaha la ii kalareeyo. Sababta ugu weyn ee ugu caawisay in aan hada ku hadlo luuqada Iswiidhishka waxaa ka mid ah in aan sameystay saaxiibo aad iigu caawinayay in aan baraaktiis la sameeyo. Mid ka mid ah farsamooyinka aan isticmaaleynay waxaa ka mid ahaa in aan xasuusano "Erayga Maanta" oo aan ku qori jiray warqado ku dhegan jikada. Dhowr bilood ka hor ayaan arkay liiskii erayada ee aan sameyn jiray. Waxay ahayd mid xiiso leh in aan xasuusto inta ay korortay aqoonteyda luuqada Iswiidhishka balse sidoo kale waxaan dib u xasuustay wadasheekeysigii aan ku sameyn jirney jikada naga dhaxeysay aniga iyo asxaabteyda. Liiska Erayada ee Maalinkasta aan sameeyo waxa uu iga caawiyay in aan barto erayo macno leh oo aan isticmaali karo. Iswiidhan way yartay in ay dhacdo in aad ku qasbanaatid in aad ku hadasho Iswiidhish adigoo yaqaana Ingiliish si ay dadku kuu fahmaan. "Marka la eego dadka aan u dhalay Ingiliishka, Dadka Iswiidhishka waxay ka mid yihiin kuwa ugu Ingiliishka fiican qaasatan xaga hadalka. Waxaan ku sheegi karaa luuqada labaad ee Sweden" Ayuu yiri Bryan Mosey, oo ah mid ka mid ah asxaabta Charlotte oo ka soo jeeda UK. Walow ay Iswiidhishku ku hadlaan Ingiliish fiican, barashada luuqadooda waxay ahayd mid aad muhiim iigu ah markii aan ka soo degay ayraboorka Arlanda ayay tiri Charlotte oo hadalkeeda sii wadata. Barashada luuqada wadanka aan martida ku ahay waxay sameynaysaa farqiga ah in aan dareen shisheeye nimo dareemo iyo in aan dareemo sidii anigoo gurigeyga jooga. Ma ahan oo kaliya in aan dalban karo kafey anigoon ku qasbin kabalyeeriga in ay isku badasho Ingiliish markay lahjadeyda maqasho. Barashada luuqada waxay kaloo macnaheedu tahay in meesha aan ku noolahay ay noqoto mid la fahmi karo, ayay intaas ku sii dartay Charlotte. "Luuqad barashadu waxay leedahay qaab ootomaatik ah" ayuu yiri Mosey, "Markaan baraneyno luuqada cusub waa in aan si isku mar ah uga fikirnaa ama u turjunaa waxa aan sheegeyno, si tartiib ah, waxaan gaarnaa heer aanan u baahnayn in aan ku fikirno luuqadeenii hore. tan waxay kordhineysaa in aad la qabsatid noloshaada cusub". ayuu intaas ku daray Mosey oo ah nin bartay luuqadaha oo saaxiib la ah Charlotte. "Waxaan aqaanaa dad badan oo Ingiliishka ku hadla oo halkan wax badan joogay aanan baran luuqada Iswiidhishka. Walow taas aad sameyn kartid, barashada luuqadu waxay kaa caawineysaa in aad fahantid dhaqanka dalka". Aqoonteyda Iswiidhishka waxay ii furtay wadooyinka khaas ah iyo kuwo shaqo intaba. Xaga khaasatan nolosheyda barashada luuqada cusub waa wax aan ku faani karo. Waxay aad iiga caawisay in aan dadka dhex galo oo aan asxaab badan la kulmo oo ah Iswiidhish iyo Ajanabi intaba. Dhacdooyinka xiisaha leh kuwo la soo koobi karo ma ahan. Mid ka mid ah asxaabteyda Iswiidhishka ayaa mar nagu yiri aniga iyo saaxiibkey walaalkey waxa uu ka shaqeeyaa "Blankets" oo ah buste ama kubeerto. labadeenuba waxaan u qaadanay in uu ka wado buste ama kubeerto. balse waxa uu ka waday in walaalkiis sameeyo barnaamijyada kombuyuutarka waayo ereyga "blankett" oo Iswiidhish ah ayaa waxa macnahiisu yahay sidaas. Barashada luuqadu waxay kaloo ahayd go'aan fiican oo xaga shaqadeyda ah. Waxaan ka qeyb qaatay mashruucyo la xiriira turjumaada Iswiidhishka iyo Ingiliishka. Sidoo kale anigoo ah Qoraa madax banaan luuqadu waxay iga caawisaa in aan dadka aan wareysiga ka qaado aan si fiican isku fahano. Laakiin wali wado dheer ayaa i sugeyga, waxaan u maleynayaa in ay wali bushumahayga ku adagtahay in aan si sax ah u dhaho ereyga SJU oo ah 7. wayna qososhay Charlotte. Taasi waa casharkii ay na siisay gabadhaash maraykanka ah siday ku baratay luuqada Iswiidhishka iyo ahmiyada ay leedahay. waxaa qoray sweden.se
Xaqiiqada ah in dadka Iswiidhishka ay ku hadlaan ingiriis aad u fiican waa barako waana dhibaato. Way fiicantahay haddii aad ku cusub tahay Stockholm ee aad joojin kartid qofkasta ee u dhexeeya 9 ilaa 99 sano si aad u waydiisid wadooyinka adigoo isticmaalaaya Ingiriis. Balse way adagtahay barashada Iswiidhishka haddii aad horey u taqaaney Ingiriis waayo markasta maskaxdaadu waxay soo qabsaneysaa Ingiriiska.
Gabadha lagu magacaabo Charlotte West ee u dhalatay maraykanka ayaa waxay ka warameysaa sideey ku baratay luuqada Iswiidhishka.
Waxaan imid Sweden bishii ogoosto 2002, anigoo wata qaamuus isku turjumaya iswiidhish iyo ingiriis, oo soo qaatay koorso 8 isbuuc ah.
Afar sano ka dib, waxaan noqday mid si sareysa ugu hali karta luuqada Iswiidhish.
Barashadeydii luqada Iswiidhishka mid fudud ma aheyn. Maalin maalmaha ka mid ah ayaan ka codsaday gabadh timaha ii sameyneysay in ay tinka ii saarto “flingor” oo ah siiriyaalka lagu darsado khuraacda anigoo rabay in aan codsado “slingor” oo ah in timaha la ii kalareeyo.
Sababta ugu weyn ee ugu caawisay in aan hada ku hadlo luuqada Iswiidhishka waxaa ka mid ah in aan sameystay saaxiibo aad iigu caawinayay in aan baraaktiis la sameeyo. Mid ka mid ah farsamooyinka aan isticmaaleynay waxaa ka mid ahaa in aan xasuusano “Erayga Maanta” oo aan ku qori jiray warqado ku dhegan jikada.
Dhowr bilood ka hor ayaan arkay liiskii erayada ee aan sameyn jiray. Waxay ahayd mid xiiso leh in aan xasuusto inta ay korortay aqoonteyda luuqada Iswiidhishka balse sidoo kale waxaan dib u xasuustay wadasheekeysigii aan ku sameyn jirney jikada naga dhaxeysay aniga iyo asxaabteyda. Liiska Erayada ee Maalinkasta aan sameeyo waxa uu iga caawiyay in aan barto erayo macno leh oo aan isticmaali karo.
Iswiidhan way yartay in ay dhacdo in aad ku qasbanaatid in aad ku hadasho Iswiidhish adigoo yaqaana Ingiliish si ay dadku kuu fahmaan.
“Marka la eego dadka aan u dhalay Ingiliishka, Dadka Iswiidhishka waxay ka mid yihiin kuwa ugu Ingiliishka fiican qaasatan xaga hadalka. Waxaan ku sheegi karaa luuqada labaad ee Sweden” Ayuu yiri Bryan Mosey, oo ah mid ka mid ah asxaabta Charlotte oo ka soo jeeda UK.
Walow ay Iswiidhishku ku hadlaan Ingiliish fiican, barashada luuqadooda waxay ahayd mid aad muhiim iigu ah markii aan ka soo degay ayraboorka Arlanda ayay tiri Charlotte oo hadalkeeda sii wadata.
Barashada luuqada wadanka aan martida ku ahay waxay sameynaysaa farqiga ah in aan dareen shisheeye nimo dareemo iyo in aan dareemo sidii anigoo gurigeyga jooga. Ma ahan oo kaliya in aan dalban karo kafey anigoon ku qasbin kabalyeeriga in ay isku badasho Ingiliish markay lahjadeyda maqasho. Barashada luuqada waxay kaloo macnaheedu tahay in meesha aan ku noolahay ay noqoto mid la fahmi karo, ayay intaas ku sii dartay Charlotte.
“Luuqad barashadu waxay leedahay qaab ootomaatik ah” ayuu yiri Mosey, “Markaan baraneyno luuqada cusub waa in aan si isku mar ah uga fikirnaa ama u turjunaa waxa aan sheegeyno, si tartiib ah, waxaan gaarnaa heer aanan u baahnayn in aan ku fikirno luuqadeenii hore. tan waxay kordhineysaa in aad la qabsatid noloshaada cusub”. ayuu intaas ku daray Mosey oo ah nin bartay luuqadaha oo saaxiib la ah Charlotte.
“Waxaan aqaanaa dad badan oo Ingiliishka ku hadla oo halkan wax badan joogay aanan baran luuqada Iswiidhishka. Walow taas aad sameyn kartid, barashada luuqadu waxay kaa caawineysaa in aad fahantid dhaqanka dalka”.
Aqoonteyda Iswiidhishka waxay ii furtay wadooyinka khaas ah iyo kuwo shaqo intaba. Xaga khaasatan nolosheyda barashada luuqada cusub waa wax aan ku faani karo. Waxay aad iiga caawisay in aan dadka dhex galo oo aan asxaab badan la kulmo oo ah Iswiidhish iyo Ajanabi intaba.
Dhacdooyinka xiisaha leh kuwo la soo koobi karo ma ahan. Mid ka mid ah asxaabteyda Iswiidhishka ayaa mar nagu yiri aniga iyo saaxiibkey walaalkey waxa uu ka shaqeeyaa “Blankets” oo ah buste ama kubeerto. labadeenuba waxaan u qaadanay in uu ka wado buste ama kubeerto. balse waxa uu ka waday in walaalkiis sameeyo barnaamijyada kombuyuutarka waayo ereyga “blankett” oo Iswiidhish ah ayaa waxa macnahiisu yahay sidaas.
Barashada luuqadu waxay kaloo ahayd go’aan fiican oo xaga shaqadeyda ah. Waxaan ka qeyb qaatay mashruucyo la xiriira turjumaada Iswiidhishka iyo Ingiliishka. Sidoo kale anigoo ah Qoraa madax banaan luuqadu waxay iga caawisaa in aan dadka aan wareysiga ka qaado aan si fiican isku fahano.
Laakiin wali wado dheer ayaa i sugeyga, waxaan u maleynayaa in ay wali bushumahayga ku adagtahay in aan si sax ah u dhaho ereyga SJU oo ah 7. wayna qososhay Charlotte.
Taasi waa casharkii ay na siisay gabadhaash maraykanka ah siday ku baratay luuqada Iswiidhishka iyo ahmiyada ay leedahay. waxaa qoray sweden.se
Runtii bogaan wuxuuna naga caawinayaa in aan luuqadeena hooyo ku ogaano waxa ka dhacaya wadan kan.
waana heersare in aan helno.
walaal maxamoud waad ku mahadsantahay fikradaada qiimaha badan, waxaan kugu boorinayaa in aad ku soo biirto bogga ee aad xubin ka noqoto. Insha Allah
September 25, 2010 at 14:15
asc walala yaal waadmahada san tihiin
asc walaala yaal waad salaaman tihiin dhamaan tiin waxaan idin lee yahay asc mar kaxik ta walaala yaal aniga waxaan ku noolahay wadan ka soomaliya mar ka waxaan ku farax sanahay sida qiimahaleh aan idin ku soobiiray sidaqii maha leh aad ii soo dheey seen mahad sanidiin
wa c/s walaal, soo dhawoow oo waad ku mahadsantahay fariinta.
asc wr wb dhamantiin wanidin salmayaa waxanan si qaar ah uu salamayaa walaalkay inoo soo gudbiyay fikirkan qiimaha badan
rabana in uu bararujiyo dhalinyarada ku dhaqan sweden
runtii anigu wxan rabay oo an u soo galay sidoo an ku heli lahaa habka ugu fudud ee lagu baran karo luuqadaha noockastoo ay yihiin lakiin nasiib wangsan waxan kala kulmay fikir lagu dayan karo tillexample gabadhu markay tidhi waxan malin kasta ky qoran jiray hal ord ah madbakha intee inleeg bay malin kasta weedh cusub qaybi kartaa ,,,,,,,,,,,, runtii walalyaal waxan qabaa luuqad kastaa oo ad rabto in ad barato waxad kubaran kartaa waa dadaal iyo samir,,,,,,ilahayn waxan inooga rajaynayaa kuwii ka faiidaystaa aqoonta wadanka talaa akhirana jana fardawsa ku kulmi,,,,,,,,,,never till tomorrow what u kan do today ,,,,,,,,,tack,,,,,,,sc wr wb,,,,,,,,,,,
January 26, 2011 at 09:07
waad mahsanid walal
ilahay ha nogu anfaco